अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई पनि साथमै राखेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा भएको सो छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रका सरोकार, अपेक्षा र प्राप्त सुझावहरूमा सरकारले यसबेला चालेका विभिन्न कदमहरू, गरेको अध्ययन र सम्बोधनको बारेमा स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवन बचाउन नै मुख्य रूपमा ध्यान दिइएको स्पष्ट पार्दै स्वतन्त्रताको असन्तुलित वकालतले गर्दा धेरै ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
उनले अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिनसकेको समेत उल्लेख गरे । कोभिड–१९ बारेको सूचना प्रवाहले भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेर जनजीवनलाई आतंकित गर्न नहुनेतर्फ सम्बन्धित सबै जिम्मेवारहरू सचेत हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।
उनले नेपाली जनता कसैलाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउँदै स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहहरूसमक्ष वास्तविक समस्या राख्नसमेत आह्वान गरे । प्रधानमन्त्रीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको प्रष्ट्याउँदै केवल कर असुलीमा मात्र ध्यान नदिइएको तथ्यमा पनि प्रकाश पारे ।
काम गरेर खान नेपालमा समस्या नरहेको स्थिति स्पष्ट पार्दैै उनले भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब खासै आकर्षण नरहेको बताए । युवाहरू यो अवस्था बुझेर देशभित्र क्रियाशील हुन पनि आह्वान गरे ।
छिमेकी भारतले धेरै रकम रेमिटान्स भित्र्याउनेमध्ये छैठौ मुलुक नेपाल रहेको यथार्थले हामीकहाँ कामको कमी छैन भन्ने देखाउने उनको भनाइ थियो ।